Hormuud Telecom Foundation oo 50-kun oo Dollar u qeybisay Naafada Soomaaliyeed | Hormuud Telecom Foundation
Home Mashaariic Ramadan Campaign Ramadan Campaign 2016 Hormuud Telecom Foundation oo 50-kun oo Dollar u qeybisay Naafada Soomaaliyeed
Hormuud Telecom Foundation oo 50-kun oo Dollar u qeybisay Naafada Soomaaliyeed	Posted July 3, 2016	by Hormuud Teleocm Foundation
(01-Jun-2016) Hey’adda Hormuud Telecom Foundation ayaa maanta waxay deeq lacageed oo gaareysa $50,000 u qeybisay naafo isugu jirta indhoolayaal iyo naafo garguurata ah oo ku sugan Magaalada Muqdisho ,waxaana mid kasta Hormuud Foundation guddoonsiisay boqol doolar oo kaash ah .
Mashruucani ayaa waxaa ka faa’ideystay 400 qoys oo ah naafada garguurata & 100 qoys oo ah dadka araga la’ ama indhoolayaasha ah.
Munaasabada guddoonsiinta deeqdan oo lagu qabtay Hotel Shamo ayaa waxaa kasoo qeyb galay guddoomiyaha Hormuud Telecom Foundation Muuse Axmed Nuur, xoghayaha guud ee ganacsatada Soomaaliyeed C/llaahi Nuur Cusmaan, guddoomiyaha dalada xoogsiinta naafada Soomaaliyeed ee SODEN Cabaas Ismaaciil Cadow, madax ka socotay PR shirkadda Hormuud, guddiga fulinta HTF, saxaafada, & 500 naafada ka faa’ideysaneysa mashruuca ah.
Guddoomiyihii hore ee Hormuud Foundation hadana ah Xoghayaha Ganacsatada Soomaaliyeed C/llaahi Nuur Cusmaan oo madasha ka hadlay ayaa ugu baaqay in inta wax heysata meel kasta oo ay dunida ka joogaan in ay gargaaraan kuwa aan heli karin wax ay ku afuraan, il gooni ahna ku fiiriyaan dadka naafada ah, sidoo kale wuxuu guddoomiyuhu u mahadceliyey shirkadda isgaarsiinta Hormuud oo suurta galisay mashruucaan, wuxuuna ku amaaney shirkada caawinta iyo u gargaarida shacabka Soomaliyeed.
Cabdulaahi ayaa u rajeeyey inta nasiibka u heshay boqolka doolar ee ay shirkadu ugu tala gashay in ay u kaalmeystaan soonka bisha Ramadaan inuu ilaahey u barakeeyo, shirkada bixisayna wax ka qeyr badan uu ilaah ugu bedelo.
Guddoomiyaha ururka xoogsiinta naafada Soomaaliyeed (SODEN) Cabaas Ismaaciil Cadow oo kaalin weyn ka qaatay isu keenista naafada oo ku hadlayey magaca dadkii naafada ahaa ee deeqda lacageed hormud foundation gudoonsiisay ayaa ka mahadceliyey.
Cabaas ayaa si gaar ah ugu mahadceliyey Hormud Foundation oo uu sheegay in ay tahay shirkadii u istaagtay in ay wax siiso dadka jilicsan tii ugu horeysay uguna dambeysay oo micnaheedu yahay in aysan jirin foundation lala simo.
Cabaas ayaa sheegay in shirkadu mudnaanta 1-aad ay siisay dadka naafada ah iyo kuwa indhoolayaasha ah oo ay markasta taakuleyso, wuxuuna ka dalbaday dhamaan inta ka faa’ideysatay barnaamijkaan shanta boqol ee qof lagu siinayey midkiiba Boqolka Doolar in ay shirkada u duceeyaan.
Guddoomiyaha Hormuud Telecom Foundation Muuse Axmed Nuur oo munaasabada soo xiray ayaa naafada iyo indhoolayaasha u sheegey in uu ku soo dhaweynayo fadliga bisha Ramadaan ee barakeysan in shirkadu kala qeyb qaadato afurintooda.
Wuxuuna xusay in shirkadu la qeybsaneyso Barnaamijka taakuleynta naafada bisha Ramadaan iyo afurinta dadka aan lixaadkoodu dhameyn.
Shirkada isgaarsiinta Hormuud qeybteeda gargaarka ee Hormuud Foundation ayaa fuliso barnaamijyo lagu caawinaya dadka tabaaleysan ee daruufaha adag lasoo gudboonaada, waxayna hey’addu caawisaa naafada, indhoolayaasha, dadka ay waxyeeladu ka soo gaarto fatahaadaha & abaaraha, gargaarka deg dega ah, & gurmadka dab damiska goobaha uu dabku ka kaco.